By VOA , Sacuudiga
RIYADH, Saudi Arabia - Dacwad-oogayaasha Sacuudiga ayaa dil toogasho u dalban doono shan nin oo ku eedeysan dilka weriye Jamaal Khaashuqji, waxaa sidaas maanta werisay wakaaladda wararka dalkaas, ayada oo maanta ay maxkamad billowday dhageysiga dacwadaha 11 eedeysane.
Turkiga weli wax jawaab ah kama bixin arrintan, hase yeeshee saraakiisha Ankara waxay horey u sheegeen in caddeymaha dilka ay la wadaageen Sacuudiga iyo dalal kale.
Warbaahinta Turkiga ayaa horey u daabacay sawirrada xubno ka mid ah ilaalada Maxamd Bin Salmaan oo galaya qunsuliyadda ka hor inta aan lagu dhex dilin Khaashuqji.
Meydka Khaashuqji, oo la rumeysan yahay in la jarjaray kadib markii la dilay, ayaan weli la helin.
Kulamada ayaa kusoo beegmaya xilli lacag Sacuudiga ugu deeqday dowladda ay...
Suxufi mucaarad ku ahaa boqorka Saudi Arabia oo lagu la'yahay Turkiga
Caalamka 05.10.2018. 16:18